Ra?isal wasaare Saacid oo balan-qaaday soo celinta adeegyadii bulshada ee Jubbooyinka (Dhegeyso) – Radio Daljir
Nofeembar 7, 2013 2:50 b 0
Muqdisho, November 7, 2013 – Ra?isal wasaaraha Jamhuuriyada Soomaaliya mudane Cabdi faarax shirdoon ayaa ergooyinka shirkii Muqdisho ee dib-u-heshiisiinta Jubbooyinka, waxaa uu ku amaanay habka hanaanka wanaagsan leh ee ay uga go?an tahay xasilooni la gaarsiiyo gobollada Jubbooyinka iyo Gedo.
?Isu-tanaasul iyo dulqaad ayaad muujiseen taas ayaa na tusaysa sida ay idiika go?an tahay in aad diyaar u tihiin in xasilooni iyo nabad laga dhaliyo gobolladaas.? Ayuu y ra?isal wasaare shirdoon ku yiri khudbad uu ka jeediyey munaasabad sagootin ah oo xalay ergooyinka loogu qabtay Muqdisho.
Ra?isal wasaare shirdoon waxaa uu balan-qaaday in xukuumadiisa ay dar-dar gelinayso in soo celingta adeegyadii bulshada ee gobollada Jubbooyinka, kuwaas oo la waayey kadib dagaalo raggaadiyey gobolladaas iyo dalka oo idil.
?Waxaa wax lagu farxo ah isu-tanaasulka ay muujiyeen ergooyinku.? Ayuu hadalkiisa ku sii daray ra?isal wasaaraha dalka oo casho sharaf iyo sagootin u sameeyey ergooyinka ka timid gobollada Jubbooyinka.
Madaxweynaha maamulka KMG ah ee Jubba Axmed Maxamed islaan (Madoobe), ayaa sheegay in heshiiska dowladda iyo maamulkiisa ay gaareen uu dhabaha u xaari doono, horumar, nabad, dib-u-soo kabasho iyo weliba xasilin ka dhacda Jubbooyinka iyo Gedo.
Dhegeyso: war-bixin uu Cabdulaahi Suldaan oo daljir ka tirsan ka diyaariyey sagootinta Ergada Jubbooyinka